Izindaba - Kuvela ukuthi ukusetshenziswa kwamamojula we-fiber fiber kubanzi kakhulu
Ngokwazi kwabantu abaningi, iyini imodyuli ebonakalayo? Abanye abantu baphendule bathi: ayiqukethe idivayisi ye-optoelectronic, ibhodi le-PCB nendlu, kepha yini enye eyenzayo?
Eqinisweni, ukucacisa, i-module optical yakhiwa izingxenye ezintathu: amadivayisi we-optoelectronic (TOSA, ROSA, BOSA), i-interface ye-optical (yezindlu) nebhodi le-PCB. Okwesibili, umsebenzi wawo ukuguqula isignali kagesi ibe yisiginali ebonakalayo kusuka ekugcineni okudlulisayo. Ngemuva kokudlulisa nge-fiber optical, ukuphela kokuthola kuguqula isignali ye-optical ibe yisiginali kagesi, okuvele kube yingxenye ye-elektroniki yokuguqulwa kwezithombe.
Kepha mhlawumbe awuzange ulindele ukuthi uhla lokufaka lwamamojula we-fiber fiber lubanzi kakhulu. Namuhla, i-ETU-LINK izokhuluma nawe mayelana nokuthi yiluphi uhla nemishini okusetshenziswa kuwo amamojula we-fiber fiber.
Okokuqala, amamojula we-fiber fiber asetshenziswa kakhulu kwimishini elandelayo:
1. Optical fibre transceiver
Le transceiver ye-fiber optical isebenzisa i-1 * 9 ne-SFP optical modules, ezisetshenziswa kakhulu kuma-intranet ezinkampani, amakhefi we-Intanethi, amahhotela e-IP, izindawo zokuhlala kanye neminye imikhakha, futhi ibanga lesicelo libanzi kakhulu. Ngasikhathi sinye, inkampani yethu ayithengisi kuphela amamojula we-optical, izintambo, ama-jumpers neminye imikhiqizo, kepha futhi ilungisa eminye imikhiqizo esekelayo, njengama-transceivers, ama-pigtails, ama-adapters njalonjalo.
Shintsha (isiNgisi: Shintsha, okusho ukuthi “shintsha”) iyidivayisi yenethiwekhi esetshenziselwa ukudlulisela isignali kagesi, ikakhulukazi kusetshenziswa amachweba kagesi, 1 * 9, SFP, SFP +, XFP optical modules, njll.
Inganikeza indlela ekhethekile yesiginali kagesi yanoma yimaphi ama-node amabili wenethiwekhi axhunywe kuswishi. Phakathi kwazo, ukushintshwa okuvame kakhulu ukushintshwa kwe-Ethernet, kulandelwe ukushintshwa kwezwi ngocingo, ukushintshwa kwe-fiber fiber, njll., Futhi sinokushintshwa komkhiqizo okungaphezulu kwama-50. Amamojula we-optical azohlolwa ukuhambisana namadivayisi wangempela ngaphambi kokuthi ashiye ifektri, ngakho-ke ikhwalithi iphezulu. Ungaqiniseka.
3. Ikhadi lenethiwekhi ye-fiber Optical
Ikhadi lenethiwekhi le-fiber optic i-adaptha ye-fiber optic Ethernet, ngakho-ke ibizwa njengekhadi lenethiwekhi le-fiber optic, ikakhulukazi isebenzisa i-1 * 9 module module, SFP module optical, SFP + optical module, njll.
Ngokwesilinganiso sokudlulisa, ingahlukaniswa ibe yi-100Mbps, 1Gbps, 10Gbps, ngokusho kohlobo lwesokhethi le-motherboard lungahlukaniswa lube yi-PCI, PCI-X, PCI-E (x1 / x4 / x8 / x16), njll. ohlotsheni lwe-interface luhlukaniswe nge-LC, SC, FC, ST, njll.
4.Umshini we-fiber osheshayo webhola lomshini webhola
I-fiber optic enejubane elikhulu isebenzisa kakhulu amamojula we-SFP optical, kanti i-dome enejubane elikhulu, ngamagama alula, ingukugcina kwekhamera ehlakaniphile. Ikhamera engaphambili yokusebenza eyinkimbinkimbi kakhulu futhi ephelele yohlelo lokuqapha. I-fiber optic dome enejubane isedomeni elinejubane elikhulu. I-module yenethiwekhi yevidiyo yenethiwekhi ehlanganisiwe noma imodyuli ye-transceiver optical.
5. Isiteshi esiyisisekelo
Isiteshi sesisekelo sisebenzisa kakhulu amamojula we-SFP, SFP +, XFP, SFP28. Ohlelweni lokuxhumana ngamaselula, ingxenye elungisiwe nengxenye engenantambo ixhunyiwe, futhi okokusebenza kuxhunywe esiteshini esihambayo ngokudluliswa okungenantambo emoyeni. Ngokuthuthuka kokwakhiwa kweziteshi eziyisisekelo ze-5G, imojula ye-optical Imboni nayo ingene esikhathini sokufunwa kokukhiqizwa.
6. Optical fibre umzila
Ama-fiber fiber ajwayelekile asebenzisa amamojula we-SFP optical. Umehluko phakathi kwayo nemizila ejwayelekile ukuthi indlela yokudlulisa ihlukile. Itheku lenethiwekhi lama-routers ajwayelekile lisebenzisa amapheya asontekile njengesixhobo sokudlulisa, futhi ikhebula lenethiwekhi eliholelayo liyisiginali kagesi; ngenkathi imbobo yenethiwekhi ye-fiber fiber router Isebenzisa i-fiber optical, engasetshenziswa ukuhlaziya isignali ebonakalayo ku-fiber yasekhaya.
Okwesibili, kunezicelo eziningi zamamojula we-fiber fiber, njenge:
1.Uhlelo lwesitimela. Kunethiwekhi yohlelo lokuxhumana lohlelo lwesitimela, ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuxhumana be-fiber fiber kuhlala kudlala indima ebalulekile. Ngeke nje ithuthukise ukusebenza kahle kokuxhumana okujwayelekile kwe-fiber fiber, kepha futhi ingakhulisa nokusebenza kahle kolwazi ekusetshenzisweni kwenethiwekhi yezokuxhumana kwezitimela ngenxa yezinzuzo zayo ezinhle zokuzinza kokudluliswa kwedatha.
2.Umhubhe ukuqapha traffic. Njengoba inqubo yokwakhiwa kwamadolobha iqhubeka nokusheshisa, ukuhamba kwabantu basemadolobheni kuya ngokuya kuncike esitimeleni. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuphepha komgwaqo ongaphansi komhlaba. Ukusetshenziswa kwe-fiber-sensing fiber fiber kumhubhe ongaphansi komhlaba kungadlala indima enkulu ekuxwayiseni ngomlilo. .
Ngaphezu kwalokho, ububanzi besicelo samamojula we-optical busesezinhlelweni zokuhamba ezihlakaniphile, ukwakha okuzenzakalelayo, abahlinzeki besixazululo senethiwekhi ye-ISP kanye namanethiwekhi wezimoto. Hhayi imicu ye-optical kuphela engasetshenziselwa ukuhanjiswa kokuxhumana, kepha amamojula we-optical nawo agcina isikhala nezindleko, futhi alula futhi ayashesha. okukhethekile.
Ngasikhathi sinye, njengensika eyinhloko yokushintshaniswa kwemininingwane yanamuhla, ukucubungula nokudlulisa, inethiwekhi yokuxhumana ebonakalayo ibilokhu ithuthuka ngokuqhubekayo ibhekisa kumvamisa we-ultra-high, ultra-high-speed and ultra-large capacity. Ukuphakama kwesilinganiso sokudlulisa, kukhula umthamo, futhi izindleko zokudlulisa imininingwane ngayinye ziya ngokuya zincipha. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zemishini yesimanje yokuxhumana, amamojula we-fiber fiber nawo asethuthuka aba amaphakheji amancane ahlanganiswe kakhulu. Izindleko eziphansi, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, isivinini esikhulu, ibanga elide, nokufakwa okushisayo nakho kuyizindlela zayo zokuthuthuka.
Isikhathi Iposi: Sep-27-2021
I-Sfp C ++, I-Xfp Transceiver, Intengo ye-Huawei Olt, Transmitter Wangaphandle Transmitter, Optical Fibre Module, IHuawei Qsfp +,